Allgedo.com » Faah-faahin dagaalkii maanta ka dhacay gudaha magaalada Balad-Xaawo ee gobolka Gedo
Print here| By: allgedo.com: Monday, September 11, 2017 // u Jawaab
Dagaalkii maanta ka dhacay gudaha magaalada Balad-xaawo ayaa waxaa ka dhashay qasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maal. Waxaa la sheegayaa in dagaalka oo ay maleeshiyada Al-shabaab kusoo qaadeen gudaha magaalada Balad-xaawo aroornimadii hore ee maanta, abaare 5 am subaxnimo ay ku dhinteen tiro kor u dhaafeysa ilaa 20 qof oo u badan ciidankii amniga degmada Balad-xaawo.
Dhaawaca ayaa la sheegayaa in uu aad u badan yahay, ayada oo maxabiistii ku jirtay xabsiga degmadana ay Al-shabaabka gebi ahaanba sii daayeen.
Maleeshada Al-shabaab ayaa subaxnimadii maanta, qiyaastu saacadda Bariga Afrika markay aheyd 9:30 am ayay iskood uga baxeen degmada, waxayna ku baxeen dhanka wadada u baxda magaalada Garbahaarey.
Waxaa kale oo la sheegayaa in ay jiraan guryo iyo hanti ku gubtay gudaha magaalada oo aanan tiradooda la sheegin,
Dadweynaha reer Balad-xaawo oo aad uga xun dagaalka ka dhacay magaaladooda ayaanan ilaa iyo maanta furin meheradihii ganacsi, halka la arkayo ciidamadii amniga dagmada oo dib ugu soo laabtay gudaha magaalada.
Maxamed Cabdi Salaad, Doolow/Soomaaliya.